iPhone 3GS ကို SIM Card မသုံးဘဲမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း6– တေလာ Lopes ツဘလော့
iPhone 3GS ကို SIM Card မသုံးဘဲမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း 6
ဒီပို့စ်တွင်သင်လုပ်လိမ့်မည် “Untether Jailbreak” iPhone 3GS ကို SIM ကဒ်မပါပဲအသုံးပြုရန်, ထို့အပြင် iOS7 နှင့် iOS8 အတွက်ပြုလုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းအဟောင်းဗားရှင်းများတွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်တွေ့ရမည်.
ယူအက်စ်အေ၌ငါ့အချိန်ကာလအတွင်း, သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က iPhone 3GS ကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ချခဲ့သည်. ငါက Apple ပန်ကာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် iPhone အဟောင်းကိုအင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတွေကိုနားထောင်ဖို့သီးသန့်သုံးဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်. တကယ်တော့ငါက Samsung အဟောင်းနှင့်အတူဤအမှုကိုပြုသော (အန်းဒရွိုက် 2) စပီကာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးရလဒ်မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်, ယနေ့ခေတ်ရေဒီယိုအများစုသည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ပင်. ငါ့အကြိုက်ဆုံးရေဒီယိုအာရုံစိုက်ရန်, ငါများသောအားဖြင့်ခေါ် app တစ်ခုအသုံးပြုသည် “ရေဒီယို“.
ပထမ ဦး ဆုံးပြproblemနာကဖြစ်ခဲ့သည်, ဘယ်လို iPhone reset ဘယ်လိုခဲ့သည်, ငါပင်အိမ်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ဘူး (အိုင်ကွန်များနှင့်အတူရိယာ), ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမက်ဆေ့ခ်ျနဲ့အတူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရပ်နေလို့ပဲ “SIM ကဒ်မတပ်ဆင်ပါ”. iTunes မှတစ်ဆင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားရန်ကြိုးစားခြင်းသည်စာကိုပြသခဲ့သည် “သင် activate လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် iPhone တွင် SIM ကဒ်မရှိပါ”. ငါကနားလည်အဖြစ်, ပုံမှန်အားဖြင့် iPhone သည် Chip ဖြင့်သာအသက်သွင်းနိုင်သည် (ဆင်းမ်ကဒ်). ဒါပေမယ့်ရေဒီယိုနားထောင်ဖို့ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi ကိုသုံးဖို့ပဲ chip တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်? pensar မဟုတ်ပါဘူး! ဒါကငါလုပ်နေတာအားဖြင့်ဖြေရှင်း “Jailbreak“.
အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာရေဒီယို application ဖြစ်သည် (ချစ်သူ) နှင့်အခြားအလားတူ app များကို iOS ဗားရှင်းတွင်မ run ပါ 6.1.6, iPhone 3GS ကအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးတာပါ. အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုတူတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည် “ဒီ application အတွက် iOS လိုအပ်တယ် 7.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း. iOS ကို update လုပ်ရမယ် 7.0 ဒီအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ အသုံးပြုရန်”. အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့?
Google ရှာဖွေမှုများပြီးပြီ, ဒီကြိုးစားပြီး, ငါအချို့တယ် “ကိတ်မုန့်စာရွက်”. ဒီလိုနဲ့ iPhone 3GS ကို SIM Card မပါပဲသုံးနိုင်ခဲ့တယ်, iOS အထက်ရှိဗားရှင်းများအတွက်ထုတ်လုပ်ထားသော application များထည့်သွင်းခြင်း 6.1.6, အခြားစကား, iOS7e iOS 8. နောက်ဆုံးမှာ, ငါတစ်ခုချင်းစီကိုအရာများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှင်းပြမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်. ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာမဖော်ပြထားသောအဆင့်များဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကံကိုစမ်းချင်ရင်, အဲဒီမှာသွားတတ်၏:
1. သင့်ရဲ့ iPhone settings ကိုချရေးပါ
၎င်းသည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်သာဆောင်ရွက်နိုင်သည်, အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမသွားလျှင်၊ သင်၌အကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရန်အစမှတ်ရှိသည်.
– အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ “ချိန်ညှိချက်များ> အထွေထွေ> အကြောင်း”
– သင့်ရဲ့ iPhone မော်ဒယ်ကိုဖေါ်ထုတ်ပါ: https://support.apple.com/pt-pt/HT201296
– iPhone 3GS တွင် Model နံပါတ်သည်နောက်ကျောဖုံးတွင်ရှိသည်: A1325 အီး A1303
ဗားရှင်း 6.1.6 (10B500)
2. ဖယ်ထုတ်ပါ / iTunes ကို Install လုပ်ပါ
စိုစွတ်သော၌မိုaining်းရွာစေ, iTunes ဆိုသည်မှာသင်၏အိုင်ဖုန်းကိုစီမံရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်သော software ဖြစ်သည်.
– သင့်ရဲ့ PC ကနေမဆို iTunes ကို uninstall
– iTunes အတွင်းရှိ paste Music မှ paste များကိုဖျက်ပါ (ဒီဖျက်ပစ်လိမ့်မယ် စာကြည့်တိုက်)
– လိုက်ဖက်တဲ့ iTunes ဗားရှင်းအဟောင်းကိုတပ်ဆင်ပါ Redsn0w
– ဤနေရာတွင် download လုပ်ပါ: https://support.apple.com/kb/DL1784?ဒေသ = pt_BR
– နမူနာ: https://www.youtube.com/watch?v=3bCnFTTA4n4
၎င်းသည် optional ဖြစ်ပြီး iPhone မှဒေတာနှင့်ဆက်တင်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်. သင်ကြည့်ချင်သောအမှု၌ပါပဲ “သုည” iPhone မရှိဘူး, ဒါပေမယ့်မင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရင်, iTunes မှတဆင့်အရန်ကူးရန်မမေ့ပါနှင့်.
– Settings> General> Reset> အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်တင်များအားဖျက်ရန်> iPhone ကိုဖျက်ပစ်ပါ
– သို့မဟုတ်စက်ရုံသို့ software ကိုပြန်လည်ရယူရန် iTunes ကိုအသုံးပြုပါ.
4. RedSn0w ကို download လုပ်ပါ
RedSn0w သည် Apple ထုတ်ကုန်များသော့ဖွင့်ရာတွင်အသုံးပြုရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်, အဆိုပါ baseband ၏အဆင့်မြှင့်ခွင့်ပြုအပြင်၌.
– ဖိုင်: edsn0w_win_0.9.15b3.zip
5. firmware ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ 3
IPWS အကြောင်း (iPhone Software များ) system ဖိုင်သူ့ဟာသူဖြစ်သည်.
– iPhone3 ကိုနှိပ်ပြီး download လုပ်ပါ: iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6. တစ် Make “Jailbreak” RedSn0w ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
– redsn0w.exe ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ
– IPSW> iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw ကိုရွေးချယ်ပါ
– IPSW ရွေးထား, OK> Yes> Back> Jailbreak ကိုဆက်လုပ်ပါ
– Install Cydia ကိုစစ်ဆေးပါ + iPad baseband> Yes> Next ကို Install ပါ
– ငါ့ကိုရိုက်ထည့်ပါ DFU စနစ်:
- iPhone ကိုပိတ်ပါ (ဖိအား3sec ပါဝါပိတ်ခလုတ်)
- ခလုတ်ကိုဖိထားပါ "Home" + "Power" က 10 စက္ကန့်, ထိုအခါ
- ခလုတ်ကိုသာလွှတ်လိုက်ပါ "Power", ဖိခလုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း "Home" ဒါကြောင့် Boot တက် mode ကိုသို့သွားသည်အထိ/DFU.
- ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ အဖြစ် မူလစာမျက်နှာပေါ်လာသည်အထိအခြေခံဆက်တင်များ (အိုင်ကွန်များနှင့်အတူရိယာ)
- RedSn0w ကိုမပိတ်ပါနှင့်!
- iPhone ကိုပိတ်ပါ (ဖိအား3sec ပါဝါပိတ်ခလုတ်) - Segure o botão "Home" + "Power" က 10 စက္ကန့်, ထိုအခါ - Solte só o botão "Power", mantendo pressionado o botão "Home" boot / DFU mode ထဲမဝင်ခင်အထိ. - မူလစာမျက်နှာပေါ်လာသည်အထိအခြေခံဆက်တင်များနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ (အိုင်ကွန်များနှင့်အတူရိယာ) - RedSn0w ကိုမပိတ်ပါနှင့်!
– နမူနာ: https://www.youtube.com/watch?v=aobho9U5D08
7. တစ် Make “Boot တက်ရုံ” RedSn0w ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
– iPhone Home ကိုဝင်ရောက်ပြီးနောက် (အိုင်ကွန်များဖြင့် desktop), RedSn0w ကိုပြန်သွားပါ:
– နောက်သို့> IPSW> iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw ကိုရွေးပါ
– Prossiga com Ok> ဟုတ်တယ်
– အကြား DFU စနစ် နောက်တဖန် (အပေါ်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကြည့်ပါ)
– ခေါ် App တစ်ခု “Cydia” မူလစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖန်တီးလိမ့်မည်
8. Cydia ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ
– Developed> Done ကိုရွေးချယ်ပါ (Loading Data ပြီးဆုံးသည်အထိမလှုပ်ပါနှင့်)
– ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ “လျစ်လျူရှုပါ (ယာယီ)” ပေါ်လာတဲ့အခါ
– ပြီးရင် Search > p0sixspwn > Install > Confirm (၎င်းသည် Untether Jailbreak ကိုဖြစ်စေသည်)
– အပြောင်းအလဲများ > အဆင့်မြှင့်ခြင်းသို့ ပြန်သွားပါ။ (n) > အတည်ပြုပါ။
– ပြန်လည်စတင်ပါ။ (ဖိအား3sec ပါဝါပိတ်ခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ)
– reboot ပြီးနောက်, Search > ultrasn0w > Install > Confirm သို့သွားပါ။ (ဆော့ဖ်ဝဲသော့ဖွင့်)
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဗီဒီယိုကျူတိုရီရယ် (အင်္ဂလိပ်/တစ်ပိုင်းတစ်စ):
Update လုပ်နည်း & Final iOS တွင် iPhone 3GS ကို လော့ခ်ဖွင့်ပါ။ 6.1.6 – Untether Jailbreak
9. iOS မှပံ့ပိုးမထားသော app များကို install လုပ်ပါ 6
iOS တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများစွာကို ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။6iPhone 3GS လုပ်ပါ။, ဒါပေမယ့် ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ (သင်သိသည်မှန်လျှင်, ငါသိပါရေစ!). iOS က တက်မလာတဲ့အတွက်, ဒါနဲ့ အက်ပ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ :)
* iTunes မရှိပါ။:
– Store> Home သို့သွားပါ
– search bar တွင်, app name ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
– menu ကိုရွေးပါ “iPhone အတွက် အက်ပ်များ” (ညာဘက်တွင်)
– ရှာဖွေထားသော/အလိုရှိသော App ကိုနှိပ်ပါ
– ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ရယူ/ရယူပါ။” (download ကိုစောင့်ပါ – အပြာရောင်တိုးတက်မှုဘား)
* iPhone မရှိပါ:
– App Store ကိုဖွင့်ပါ။
– ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အပ်ဒိတ်များ” (အောက်ခြေဘား, ညာဘက်တွင်)
– ကလစ်နှိပ်ပါ “ဝယ်ယူခဲ့သည်။”
– ရွေးချယ်ထားသော App တွင် ပေါ်လာရပါမည်။ “တပ်ဆင်ခြင်း”, ဒါပေမယ့် လော့ခ်ကျလိမ့်မယ်။ (မပြည့်စုံ)
– အိမ်မရှိ။ (iPhone ဒက်စ်တော့), အက်ပ်အိုင်ကွန်တွင် တိုးတက်မှုဘားတန်း မပြည့်စုံပါ။
– အက်ပ်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။ (စက္ကန့်အနည်းငယ်) ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ “x က” ဖျက်ရန်
– home ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
– App Store သို့ တစ်ဖန်ပြန်လာပါ။. အက်ပ်ဘေးတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အိုင်ကွန်တစ်ခုရှိသည်။ (အောက်မြှား)
– “ဤအက်ပ်၏ ဗားရှင်းအဟောင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။?”, download ကိုနှိပ်ပါ။.
“လက်ရှိဗားရှင်းသည် iOS လိုအပ်သည်။ 7.1 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, ဒါပေမယ့် သင်နောက်ဆုံးလိုက်ဖက်နိုင်တဲ့ဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။”
စုစုပေါင်း access: 21321
31 ဇန္နဝါရီလ 2016 တေလာ Lopes	ပန်းသီး, Cydia, iOS 6.1.6, iphone 3gs, Jailbreak, sim ကဒ်, ရေတံခွန်
2 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “iPhone 3GS ကို SIM Card မသုံးဘဲမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း 6”
Jailbreak ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး, ဒီသင်ခန်းစာ, ဒါဟာ SIMcard မပါဘဲ device ကိုအသုံးပြုခြင်း၏တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်. အိုင်ဖုန်း OS ကိုစတင်ပွီး (များသောအားဖြင့်အသုံးပြုနေသည်, တစ်ဦး SIMcard နှင့်အတူ, သို့မဟုတ် Jailbreak အားဖြင့်) အက်ပ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြားချက်များ “မထောက်ခံပါ။” အတူတူပါပဲ.
ဒါက, အက်ပ်များကို ထည့်သွင်းရန် “မထောက်ခံပါ။” (quotation အမှတ်အသားများကို အလေးထားပါ။) နောက်ဆုံးပေါ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဗားရှင်းကိုသာ လက်ခံပါ။ (ထို့ကြောင့် quotation အမှတ်အသားများကို အလေးထားပါ။).
အမှုကဒါပဲ, ယခုတွင် 2017, အများစုက iOS အတွက် တောင်းဆိုနေကြပါပြီ။ 8. အဲဒါမှာ “နောက်ဆုံးပေါ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောဗားရှင်း” မရနိုင်တော့ပါ။, WhatsApp နှင့် Instagram ကဲ့သို့ပင်. အခုဘယ်လိုနေလဲ?
5 ဧပြီလ 2017 သို့ 6:12
မိတျဆှေ, အိုင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုဖို့မရှိတော့ 3. ငါသည်အခြားဖြေရှင်းနည်းကိုရှာရပါလိမ့်မယ်, တောင်းပန်ပါတယ်!
7 ဧပြီလ 2017 သို့ 17:40
modem မှတဆင့် run ဖို့ DDNS Configuring + Router က အဘယ်သူမျှမ-IP နဲ့ DynDNS မေ့လျော့တော်! သင့် router အလုပ်တံတား mode မှာ Make နှင့် DNS-O-MATIC နှင့်အတူ DDNS configure. Problema Aviso: ဒီ Post ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအချို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆရှိပါတယ်. ငါအော်ပရေတာမင်္ဂလာပါတဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့ပြီး ...
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.470.022 ဝင်ရောက်ခွင့်